ရွှေမှုန်ရတီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇေရဲထက် ရှင်းပါပြီ...! - Thadin
[ May 20, 2019 ] မြောက်ဥက္ကလာမှာ ဖြစ်တဲ့ ကားနဲ့ ဆိုင်ကယ်.. ပွဲကြမ်းနေကြတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…! NEWS
[ May 20, 2019 ] တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးကြီး ရက်ရှည် ရွာသွန်းမှာမို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါရန်…! NEWS
[ May 20, 2019 ] လှိုင်​သာယာ ​အောင်​​မြေသာယာ ဘုရားမှ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်…! NEWS
[ May 20, 2019 ] သဲခြေကျောက်တည်နေတာကို မခွဲလိုက်ရပဲ ကောင်းသွားတဲ့နည်းလေးမို့ မျှဝေပါရစေ…! HEALTHY
[ May 20, 2019 ] အတူအိပ်မယ့် ပြည့်တန်ဆာမိန်းကလေးမှ အမျိုးသားကိုဆေးခပ်ပြီး အချဉ်ဖမ်း ထွက်ပြေး…! NEWS
HomeCELEBRITYရွှေမှုန်ရတီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇေရဲထက် ရှင်းပါပြီ…!
ရွှေမှုန်ရတီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇေရဲထက် ရှင်းပါပြီ…!
March 15, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on ရွှေမှုန်ရတီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇေရဲထက် ရှင်းပါပြီ…!
အနုပညာ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဖြေးဖြေးနဲ့မှန်မှန်လေးလျှောက်လှမ်းနေပြီးတော့ ကျရာ ဇာတ်ရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စွယ်စုံရမင်းသားလည်းဖြစ် ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစား နာမည်ကြီးနေတဲ့ မင်းသားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဇေရဲထက်ဆိုတာ ပရိတ်သတ်တွေရဲ အချစ်တော်လေးတစ်ယောက်ပါ။
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့အသဲစွဲကို ကိုတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးခြင်းကိုခံထားရသူ ဇေရဲထက်ကတော့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရွှေမှုန်ရတီနဲ့ သူကြား လူတစ်ချို့က မကောင်းမြင်တဲ့ အကြောင်းတွေအပေါ် အခုလိုပဲ ရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်။
“ဒီနှစ် အကယ်ဒမီပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို ပေးသင့်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က အမြဲတမ်းဝေဖန်ခံနေရပြီး အမြဲအပြောခံနေရတာဆိုတော့လေ တခြားဆုတော့ မဟုတ်ပါဘူး အပြောခံရဆုံး ဆုဆိုပြီး ပေးသင့်တယ်။ ကျွန်တော်က တစ်ခါတစ်လေကျရင် မဟုတ်မခံတဲ့စိတ်ရှိတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့
ကျွန်တော်ကလည်း သူများကို ကောင်းတာလည်း မပြောဘူး ဆိုးတာလည်း မပြောဘူး ပြီးတော့ ကိုယ် ဘာလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ပြောတာလည်း မရှိဘူး ဘာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်တာလည်း မရှိဘူး အဲ့တော့ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုပြောလာတဲ့အခါကျရင် ကျွန်တော်ကလည်း သာမန်လူတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ပေါက်ကွဲတာတွေလည်းရှိတာပေါ့
ဒီကိစ္စဆိုတာ သူတို့ ပြောသင့်မပြောသင့် ရေးသင့်မရေးသင့်ဆိုတာ စဉ်းစားရမယ်လေ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရွှေမှုန်ရတီသည် အိမ်ထောင်ဘက်ရှိတယ် သူ့မှာ ကာမပိုင်ယောက်ျားရှိတဲ့အတွက် ဒါမျိုးရေးလိုက်ရင် သူတို့ အိမ်ထောင်ဘက်အတွက် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် စိတ်ထဲမှာ ကိုးလို့ကန့်လန့် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်
အဲ့ဒါမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ဘူး ရေးလည်း မရေးသင့်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် သံယောဇဉ်လည်း ပြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်။ ရွှေမှုံနဲ့တော့ ဒီကိစ္စကို မပြောဖြစ်ပါဘူး သူကလည်း သူမှန်တယ်ထင်ရင် ဂရုမစိုက်သလို ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော်မှန်တယ်ထင်ရင် ဖြေရှင်းပေးစရာလည်း မလိုဘူး
ကာယကံရှင် နှစ်ယောက်လုံး မှန်တယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက် ချပြစရာမလိုဘူး ကျွန်တော် Share တာကလည်း ဒါမျိုးတွေ မရေးသင့်ဘူး မတင်သင့်ဘူးဆိုတာကို ချပြတာပါ။
ဒီလိုလုပ်တဲ့သူတွေကို ပြောချင်တာက ကိုယ်ချင်းစာကြပါ ကိုယ်လိုမျိုး တစ်ဖက်သား ဘယ်လို ခံစားသွားရမလဲဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားပေးကြပါ ဒီကိစ္စသည် လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်နဲ့ ရွှေမှုန်ရတီသည် ဖြူစင်စွာနဲ့ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ် မောင်နှမသံယောဇဉ်ပဲ ရှိပါတယ် အဲ့ထက်မပိုပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံးသည် အခု ကိုရွှေထူးနဲ့ ရတဲ့အချိန်ကစပြီး ပတ်သက်မှုလည်း မရှိတော့ဘူး။သူကလည်း သူ့အလုပ် သူ့ယောက်ျားနဲ့ တိုင်ပင်တာတွေရှိတာပေါ့ အရင်ကဆို ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တိုင်ပင်တာလေးတွေရှိတယ်
အခုသူ့မှာ ယောက်ျားရသွားတဲ့ အတွက် သူရဲ့ယောက်ျားကိုပဲ တိုင်ပင်ကောင်း တိုင်ပင်လိမ့်မယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု မရှိတော့ပါဘူး ကာယကံရှင် နှစ်ယောက်လုံးသိသလို တခြားသူတွေလည်း ယုံကြည်ပေးပါလို့ ကျွန်တော် ပြောချင်ပါတယ်”လို့ ရွှေမှုန်နဲ့ အရင်လို အဆက်သွယ်မရှိတော့ကြောင်းနဲ့ Facebookမှာ တက်နေတဲ့ သတင်းအကြောင်းအရာက တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ရှင်းပြသွားပါတယ်။
အနုပညာ လမျးကွောငျးပျေါမှာ ဖွေးဖွေးနဲ့မှနျမှနျလေးလြှောကျလှမျးနပွေီးတော့ ကရြာ ဇာတျရုပျကို ပီပီပွငျပွငျနဲ့ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ စှယျစုံရမငျးသားလညျးဖွဈ ပရိတျသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစား နာမညျကွီးနတေဲ့ မငျးသားလေးတဈယောကျဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျဇရေဲထကျဆိုတာ ပရိတျသတျတှရေဲ အခဈြတျောလေးတဈယောကျပါ။
နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့အသဲစှဲကို ကိုတဈယောကျလညျးဖွဈသလို ပရိတျသတျတှရေဲ့ တဈခဲနကျအားပေးခွငျးကိုခံထားရသူ ဇရေဲထကျကတော့ သူငယျခငျြးဖွဈသူ ရှမှေုနျရတီနဲ့ သူကွား လူတဈခြို့က မကောငျးမွငျတဲ့ အကွောငျးတှအေပျေါ အခုလိုပဲ ရှငျးပွသှားခဲ့ပါတယျ။
“ဒီနှဈ အကယျဒမီပေးမယျဆိုရငျ ကြှနျတျော့ကို ပေးသငျ့တယျ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောက အမွဲတမျးဝဖေနျခံနရေပွီး အမွဲအပွောခံနရေတာဆိုတော့လေ တခွားဆုတော့ မဟုတျပါဘူး အပွောခံရဆုံး ဆုဆိုပွီး ပေးသငျ့တယျ။ ကြှနျတျောက တဈခါတဈလကေရြငျ မဟုတျမခံတဲ့စိတျရှိတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့
ကြှနျတျောကလညျး သူမြားကို ကောငျးတာလညျး မပွောဘူး ဆိုးတာလညျး မပွောဘူး ပွီးတော့ ကိုယျ ဘာလိုခငျြတဲ့စိတျနဲ့ ပွောတာလညျး မရှိဘူး ဘာဖွဈခငျြတဲ့စိတျနဲ့ လုပျတာလညျး မရှိဘူး အဲ့တော့ တဈခါတဈလေ ကိုယျ့ကိုပွောလာတဲ့အခါကရြငျ ကြှနျတျောကလညျး သာမနျလူတဈယောကျ ဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့မလို့ တဈခါတဈလကေရြငျ ပေါကျကှဲတာတှလေညျးရှိတာပေါ့
ဒီကိစ်စဆိုတာ သူတို့ ပွောသငျ့မပွောသငျ့ ရေးသငျ့မရေးသငျ့ဆိုတာ စဉျးစားရမယျလေ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှမှေုနျရတီသညျ အိမျထောငျဘကျရှိတယျ သူ့မှာ ကာမပိုငျယောကျြားရှိတဲ့အတှကျ ဒါမြိုးရေးလိုကျရငျ သူတို့ အိမျထောငျဘကျအတှကျ ဘယျလိုဖွဈသှားမလဲ မဟုတျဘူးဆိုရငျတောငျ စိတျထဲမှာ ကိုးလို့ကနျ့လနျ့ ဖွဈသှားနိုငျတယျ
အဲ့ဒါမြိုးတှေ မလုပျသငျ့ဘူး ရေးလညျး မရေးသငျ့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးနှဈယောကျ သံယောဇဉျလညျး ပွတျတောကျသှားနိုငျတယျ။ ရှမှေုံနဲ့တော့ ဒီကိစ်စကို မပွောဖွဈပါဘူး သူကလညျး သူမှနျတယျထငျရငျ ဂရုမစိုကျသလို ကြှနျတျောကလညျး ကြှနျတျောမှနျတယျထငျရငျ ဖွရှေငျးပေးစရာလညျး မလိုဘူး
ကာယကံရှငျ နှဈယောကျလုံး မှနျတယျဆိုတာသိတဲ့အတှကျ ခပြွစရာမလိုဘူး ကြှနျတျော Share တာကလညျး ဒါမြိုးတှေ မရေးသငျ့ဘူး မတငျသငျ့ဘူးဆိုတာကို ခပြွတာပါ။
ဒီလိုလုပျတဲ့သူတှကေို ပွောခငျြတာက ကိုယျခငျြးစာကွပါ ကိုယျလိုမြိုး တဈဖကျသား ဘယျလို ခံစားသှားရမလဲဆိုတာ ဘယျလိုဖွဈသှားမလဲ ဆိုတာကို စဉျးစားပေးကွပါ ဒီကိစ်စသညျ လုံးဝမဟုတျပါဘူး ကြှနျတျောနဲ့ ရှမှေုနျရတီသညျ ဖွူစငျစှာနဲ့ သူငယျခငျြးသံယောဇဉျ မောငျနှမသံယောဇဉျပဲ ရှိပါတယျ အဲ့ထကျမပိုပါဘူး
ကြှနျတျောတို့ နှဈယောကျလုံးသညျ အခု ကိုရှထေူးနဲ့ ရတဲ့အခြိနျကစပွီး ပတျသကျမှုလညျး မရှိတော့ဘူး။သူကလညျး သူ့အလုပျ သူ့ယောကျြားနဲ့ တိုငျပငျတာတှရှေိတာပေါ့ အရငျကဆို ကြှနျတျောတို့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျတိုငျပငျတာလေးတှရှေိတယျ
အခုသူ့မှာ ယောကျြားရသှားတဲ့ အတှကျ သူရဲ့ယောကျြားကိုပဲ တိုငျပငျကောငျး တိုငျပငျလိမျ့မယျ အဲ့တော့ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျကွားမှာ ပတျသကျဆကျနှယျမှု မရှိတော့ပါဘူး ကာယကံရှငျ နှဈယောကျလုံးသိသလို တခွားသူတှလေညျး ယုံကွညျပေးပါလို့ ကြှနျတျော ပွောခငျြပါတယျ”လို့ ရှမှေုနျနဲ့ အရငျလို အဆကျသှယျမရှိတော့ကွောငျးနဲ့ Facebookမှာ တကျနတေဲ့ သတငျးအကွောငျးအရာက တကယျမဟုတျဘူးဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ရှငျးပွသှားပါတယျ။
“သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်လျှင် ထောင်ဒဏ်တစ်သက်အထိ ချမှတ်ခံရမည်”
အဆုတ်ကင်ဆာ ဆဲလ်များကို သေစေနိုင်သည့် ရဲယိုရွက်…!
Users Today : 1367
This Month : 38821
This Year : 234219
Total Users : 593243
Total views : 2722983